Ikhaya / izicelo / Ukutshisa ukunyuka / I-induction preheating ialuminiyam yokupeyinta
Udidi: Ukutshisa ukunyuka tags: ivili lealuminium, Ukufudumeza ivili lealuminium, Isitya sangaphambili sealuminium, Ukulungiswa kweevili zeemoto, Ukufudumeza kwangaphambili, ukuqulunqa ukutshiza, induction Ubushushu bealuminium, Ukufakelwa kwangaphambili kweevili zeemoto, induction preheating ivili, maxesha a phakathi, ukufudumeza kwamaxesha aphakathi, ukutshisa, ukutshisa ivili lealuminium, ukulungisa amavili ealuminium ezithuthi
Ukufakelwa kweevili zealuminium ukupeyinta ukutshiza
Injongo: Esi sicelo sokupeyinta sokutshiza sidinga ukufudumeza izinto. Ukongeza, kukho imfuneko yokuba loo nto mayingapholi ngaphantsi kweqondo elithile lobushushu ngaphambi kokutshiza.
imathiriyeli : Izixhobo ezibonelelwa ngabathengi
iqondo lobushushu : 275 ºF (135 ºC)
Ubuninzi : 8 kHz
I-DW-MF-70kW inkqubo yokufudumala, Ixhotywe ngesihloko esisebenza kude esiqukethe ii-capacitors ezingama-27 μF zizonke eziyi-81 μF
-Ikhoyili yokufudumeza yenzelwe kwaye yaphuhliswa ngokukodwa kwesi sicelo.
Inkqubo yokuFudumeza induction
Ukudityaniswa kwamacala amaninzi okusetyenziswa kwe-helical / pancake coil kuyasetyenziswa. Ivili le-aluminium engama-22 lifakwa kwikhoyili kwaye lifudunyezwa imizuzwana engama-30 ukuya kubushushu obungu-275 ºF. Xa ukufudumeza kumisiwe, icandelo lihlala phezulu okanye ngaphezulu kwe-150 ºF kwimizuzwana eyi-108, ukufezekisa ubushushu ekujoliswe kubo.
Iziphumo / IiNzuzo Ukutshisa ukutshisa inikezela:
-Ukusasazwa kobushushu ngendlela efanayo phezu kwevili
Ulawulo oluchanekileyo lokufudumeza kunye nephethini
-Ukusebenza; kuncitshiswe iindleko zamandla
I-MF-45 yexesha eliqhelekileyo lokufudumala umbane
Ukukhishwa kweeBlaji kunye nokuKhiveshi